ny tatitry ny solontenan’ny Fikambanana Manerantany ho an’ny Fahasalamana (OMS) miasa eto Madagasikara, Ndiaye Charlotte. Tsy maintsy malina hatrany ny firenena Malagasy amin’ny fiatrehana io valan’aretina io hoy hatrany izy ary tena ilaina ny fanaovana ny vaksiny faobe ho tohin’ny ezaka efa natao. Deraina ny Malagasy satria tsara ny ezaka vita ary voaasa handray ny loka voalohany any Washington ny ministera amin’ity volana septambra ity. 7 tapitrisa mahery mantsy no zaza enim-bolana hatramin’ny 9 taona vita vaksiny ary mbola mitohy hatrany ny ezaka hoy ny minisitry ny fahasalam-bahoaka, Pr Julio Rakotonirina sy ny solotenan’ny OMS. Tsiahivina fa 2 tapitrisa dolara ny famatsiam-bola natao tamin’ny vaksiny faobe farany ary niandreketan’ny Instat mihitsy ny fanadihadiana rehetra natao hialàna amin’ny kolikoly izay nisy teo aloha.